MassiveImpact: Akwụ ụgwọ otu ọrụ netwọ mgbasa ozi mkpanaka | Martech Zone
Echiche, echiche, clicks… M na-eche ihe mere anyị ji atule ma kpọsaa dabere na usoro ndị a. MassiveImpact bụ a mobile ad netwọk na-eru ihe karịrị 1 ijeri mobile internet ọrụ si 190 mba na ha adịghị. Ha na-eji CPA, ma ọ bụ ụgwọ ọ bụla, iji chọpụta ọnụahịa mgbasa ozi ha. Nke ahụ ziri ezi… ị na-akwụ ụgwọ naanị mgbe enwere mgbanwe n'ezie! Nke a pụtara na nloghachi gị na ego ga-ekwe nkwa.
MassiveImpact na-enye a Advertisingdị mgbasa ozi mobile-tier, iji MassiveImpact Event Tracker:
Efu Per nwụnye (CPI) - kwụọ ụgwọ dịka ndị ọrụ ọhụụ wụnye ngwa gị (ihe eji arụ ọrụ)
Post-echichi omume - nwee MassiveImpact na-akwalite ụfọdụ ngwaahịa maka gị ma kwụọ ụgwọ dị ka
ndị ahịa gị na-azụta ha, n'ime ngwa gị (ụdị ntinye ego)
MassiveImpact na-enye ndị mmepe ngwa na ndị na-ebipụta saịtị mkpanaka yana ikpo okwu na njedebe, na-akwado ndụ ndụ zuru ezu site na mbipụta mgbasa ozi, na-elekwasị anya na nsuso arụmọrụ na njedebe. nchịkọta, na-ebute ngwongwo ego, nchọta ngwa na nnweta onye ọrụ. MassiveImpact proprietary njikarịcha algorithms na-kere kpọmkwem maka arụmọrụ mobile mgbasa ozi arena.
MassiveImpact si arụmọrụ ozugbo (RTP) ikpo okwu na-enyere ndị mgbasa ozi aka inweta ndị ahịa ọhụrụ nwere ROI kwere nkwa. A na-enweta mmelite ahụ site na usoro nchọpụta ndị ahịa na-echere, dabere na akụkọ ntughari nke onye ọrụ. Nchikota nke MassiveImpact's RTP na njikwa oru nke TargetAdLive® nke ngwa ahia na-enye ohere maka oge izizi na njedebe.
TargetAdLive® bụ isi teknụzụ MassiveImpact. Otu teknụzụ dabere na teknụzụ ezubere iche, TargetAdLive® bụ ndị otu MassiveImpact na-arụrụ ọrụ iji mepụta mgbasa ozi mgbasa ozi arụmọrụ ya. Ezie na omenala mobile ad ngwọta na-elekwasị anya na ot mobile marketing- dabeere profaịlụ ụzọ na a na-eleghara 98% nke data dị; TargetAdLive® na-eji data niile dịnụ iji mee ka onye ọrụ ọ bụla nwee ohere ịzụta otu ngwaahịa.
TargetAdLive®, na-enyocha ihe atụ nke ndị na-ebu ', ndị mbipute' ma ọ bụ ndị na-enye ọrụ ikuku 'data ndị ahịa data enyere na mgbasa ozi ndị mgbasa ozi. Ọ na-ahọrọ, na ozugbo, mgbasa ozi nke nwere ike ịhụ nsonaazụ kacha mma wee si otú a na-eweta ego kachasị. TargetAdLive® na ndị ahịa mgbasa ozi abụọ na ndị ahịa nwere ike ịme ihe achọrọ, dabere na data njirimara niile anakọtara, dabara profaịlụ onye ọrụ yana ọdịnaya mgbasa ozi ma na-eje ozi mgbasa ozi dị mkpa.
Tags: ụgwọ maka nrụnyennukwu ihenetwork ad networkekwentị mkpanaaka downloadpost-nwụnye ihe omumearụmọrụ ozugboTargetAdLive